Hong Kong Ahoɔfɛ Hemmaa Nyaa Biribi a Ɛsen Anuonyam Koraa | Asetenam Nsɛm
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikongo Kikuyu Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Kwangali Kwanyama Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Maltese Maya Myanmar Ndebele Ndonga Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tatar Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zulu
Menyaa Biribi a Ɛsen Anuonyam Koraa
Mina Hung Godenzi anom asɛm
Da koro anwummere bi, wɔ afe 1984 mu no, biribiara sesae wɔ m’asetenam. Ná meyɛ ababaa a obiara mmu me ho akonta, nanso mebɛgyee din prɛko pɛ. Wɔbɔɔ me abotiri sɛ Hong Kong Ahoɔfɛ Hemmaa. Nsɛmma nwoma ne atesɛm krataa biara anim no, na me mfonini da so. Ná meto dwom, sa, ma ɔkasa, hwɛ TV dwumadi so. Afei nso na mehyɛ ntade pa, na na me ne nnipa atitiriw te sɛ Hong Kong amrado na ɛbɔ.
Afe a ɛdi hɔ no, wɔfirii ase de me yɛɛ sini, na mpɛn pii no na medi akoten wɔ mu. Ná nsɛnkyerɛwfo pɛ m’anom asɛm atie, mfoninitwafo pɛ me mfonini, na sɛ siniyɛfo reyi sini bi adi anaa nkurɔfo rebue ɔdan bi ano a, na wɔpɛ sɛ meba ase. Afei nso apontow biara a nkurɔfo bɛyɛ no, na wɔto nsa frɛ me. Baabiara a mɛfa no, na nkurɔfo bɔ gye me so.
Mereyɛ sini a awudisɛm wom
Nanso bere rekɔ so no, mebɛhuu sɛ edin ne anigyede no nyinaa nka hwee. Ná metaa yɛ sini a awudisɛm ahyɛ mu ma, na na asiane wom paa. Wɔn a wɔyɛ sini wɔ Hong Kong no mfa obi nsi wɔn ananmu nyɛ sini no fã a asiane wom no sɛnea wɔtaa yɛ wɔ Hollywood no. Enti m’ankasa na na meyɛ sini no fã a ɛyɛ hu no; ná metumi de moto tu fa kar so. Sini ahorow a medii mu akoten no pii yɛ nea na ɔbrasɛe ne awudisɛm ahyɛ mu ma. Ná ebi nso yɛ ahonhonsɛmdi nko ara.
Afe 1995 no, mewaree obi a ɔhwɛ ma wɔyɛ sini. Ɛwom, na ɛte sɛ nea mewɔ biribiara a ɛbɛma m’ani agye; ná mewɔ okunu a ɔdɔ me ne ahonyade, na na magye din nso. Nanso weinom nyinaa akyi no na menni anigye. Enti meyɛɛ m’adwene sɛ merenyɛ sini bio.
MEKAEE NEA MESUAE WƆ ME MMOFRABEREM
Afei mefirii ase kaee nneɛma a mesuae bere a na meyɛ abaayewa no. Saa bere no, Memenda biara na me ne me nua panin kɔsra abusua bi a wɔyɛ Yehowa Adansefo. Ná Joe McGrath a ɔyɛ abusua no ti no de yɛn ka ne mma mmaa mmiɛnsa ho ma yɛsua Bible. Ná ɔdɔ ne anigye wɔ wɔn abusua no mu, na na “Uncle Joe” bu ne yere ne ne mma no. Afei nso, na m’ani gye Kristofo nhyiam a me ne wɔn kɔ no ho. Ɛtɔ da a, na yɛkɔ nhyiam akɛse. Ná ɛyɛ anigye bere paa. Sɛ mewɔ Adansefo no mu a, na me ho tɔ me.
Nanso m’abusua mu deɛ, na nneɛma nkɔ yie koraa. Me papa suban nti, na me maame nni anigye, enti daa na ɔdi awerɛhoɔ. Medii bɛyɛ mfe du no, na me maame ne Yehowa Adansefo mmɔ bio. Menenam mu saa ara na mebɔɔ asu bere a na madi mfe 17. Nanso ankyɛ na mede me ho kɔhyɛɛ brabɔne mu, na mefirii asafo no mu.
MESII GYINAE SƐ MƐSAN ABA
Mewaree no, ankyɛ koraa na Yehowa Adansefo asafo mu mpanimfoɔ mmienu bɛsraa me. Wɔma mehuu nea meyɛ a mɛsan aba Yehowa Nyankopɔn nkyɛn, na wɔyɛɛ nhyehyɛe sɛ ɔsɛmpatrɛwfo bi a wɔfrɛ no Cindy mmoa me. Saa bere no na me gyidi ano adwo, enti meka kyerɛɛ no sɛ ɔmma menhu nea ɛkyerɛ sɛ Bible no yɛ Onyankopɔn Asɛm ampa. Ɔkyerɛɛ me Bible nkɔmhyɛ a anya mmamu no bi. Nkakrankakra, yɛbɛyɛɛ nnamfo paa, na ɔkaa sɛ me ne no nsua Bible mu mfitiase nkyerɛkyerɛ no. Mepenee so. Afei mebɛhuu sɛ Yehowa yɛ ɔdɔ Nyankopɔn a ɔpɛ sɛ m’ani gye.
Bere a mesan firii ase kɔɔ Kristofo nhyiam no, mehuu sɛ sɛ mewɔ Adansefo no mu a m’ani gye paa sen sɛ mewɔ wɔn a wɔyi sini no mu. Nanso nea mefaa mu wɔ me mmofraase no ma menyaa adwene sɛ mentumi nnye obiara nni; ná m’ani nnye me ho. Asafo no muni bi de Bible no boaa me ma mehuu ɔkwan a mɛtumi afa so adi sɛnea mete nka no so, na mehuu sɛnea mɛfa nnamfo pa nso.
BIRIBI A ƐSEN ANUONYAM KORAA
Afe 1997 mu no, me ne me kunu tu kɔɔ Hollywood, California, U.S.A. Yɛkɔɔ hɔ no, meyeree me ho boaa nnipa pii ma wɔhuu sɛ mfaso wɔ so sɛ wɔde Onyankopɔn Asɛm bɔ wɔn bra. Bible a mede kyerɛkyerɛ no ama manya abotɔyam sen edin a mɛgye wɔ siniyɛ mu. Nhwɛso bi ni, wɔ afe 2002 mu no, mehyiaa obi a na menim no wɔ Hong Kong a wɔfrɛ no Cheri. Ná yɛdi nsɛ wɔ akwan pii so. Ansa na merebɛyɛ Hong Kong Ahoɔfɛ Hemmaa no, ɔno na na saa abodin no kura no. Bere a medii nkonim no, ɔno na ɔde abotiri no hyɛɛ me. Ɔno nso bɛyɛɛ sini, na akyiri yi na ɔhwɛ ma wɔyɛ sini, na na ɔne wɔn a wɔhwɛ sini so a wɔagye din na ɛbɔ. Ná ɔno nso abɛtena Hollywood.
Ná wanya anuonyam ne ahonyade a nkurɔfo repere hwehwɛ no bi, nanso na ɔnni anigye na na ɔnni obiara mu ahotoso. Bere a metee sɛ ɔbarima a ɔrebɛware Cheri anya komayare ma wahwere ne nkwa no, Cheri asɛm no yɛɛ me mmɔbɔ. Wannya awerɛkyekye biara wɔ Buddhasom a na ɔwɔ mu no mu. Enti mefirii ase kaa nea meresua fi Bible mu no kyerɛɛ no, nanso Buddhasom a wɔde tetee no nti, na ɛyɛ den sɛ ɔbɛgye atom.
Cheri ahosiesie a ɔde yɛɛ sini bi
Afe 2003 mu no, mewɔ hɔ ara na Cheri frɛɛ me firii Vancouver, Canada; ɛhɔ na na ɔreyɛ sini. Ɔde anigye ka kyerɛɛ me sɛ, bere a ɔte kar mu na ɔrehwɛ abɔde a ɛyɛ fɛ no, nea ɔhui ara ne sɛ ɔrebɔ mpae denneennen sɛ: “Ka kyerɛ me, Hwan ne nokware Nyankopɔn no? Wo din de sɛn?” Saa bere no ara na ɔkɔpuee Ahenni Asa bi so na ɔhuu edin Yehowa. Ɛno nti ɔtee nka sɛ Onyankopɔn atie ne mpaebɔ, na na ne ho pere no sɛ ɔbɛhu Yehowa Adansefo no. Meyɛɛ nhyehyɛe maa no, na ankyɛ koraa na ɔfiri ase kɔɔ asafo nhyiam a wɔyɛ no China kasa mu a ɛwɔ Vancouver no.
Akyiri yi Cheri ka kyerɛɛ me sɛ, “Saa nkurɔfo yi dwene me ho paa. Mɛtumi aka me komam asɛm akyerɛ wɔn.” Nea Cheri kae no maa m’ani gyei paa efisɛ bere a na ɔyɛ sini no na ɔnni adamfo biara. Cheri annyae asafo nhyiam da. Nanso wɔ afe 2005 mu no, ɔne siniyɛfo bi yɛɛ nhyehyɛe sɛ ɔbɛyɛ sini mmienu bi wɔ China ama wɔn, enti ɔsan kɔɔ Hong Kong. Anigyesɛm ne sɛ, wɔ afe 2006 mu no, Cheri hyiraa ne nkwa so maa Yehowa, na ɔbɔɔ asu wɔ nhyiam bi a Adansefo no yɛe ase wɔ Hong Kong. Ɛwom sɛ na ɔpɛ sɛ ɔde bere pii som Yehowa de, nanso sini adwuma no nti, na ɛyɛ den ma no paa, na na n’ani nnye.
YƐBOA AFOFORO A, YƐN ANI GYE
Wɔ afe 2009 mu no, Cheri asetena sesae koraa. Nea ɛbɛyɛ na wanya bere pii asom Yehowa no, ɔgyaee sini adwuma no. Ɔnyaa nnamfo foforo pii wɔ Kristofo asafo no mu. Ɔde bere pii ka Ahenni no ho asɛmpa no, na n’ani gye paa sɛ ɔboa nkurɔfo ma wɔnya anidaso wɔ asetenam.—Mateo 24:14.
Afei Cheri firii ase suaa Nepal kasa sɛnea ɛbɛyɛ a ɔbɛboa Adansefo a wɔka Nepal kasa wɔ Hong Kong no. Nea mɛka ne sɛ nkurɔfo mmu Nepalfo a wɔte Hong Kong, na mpo wɔkasa tia wɔn efisɛ wɔnte Borɔfo anaa China kasa papa. Afei nso, ɛsono wɔn amammerɛ. Cheri ka sɛ, n’ani agye sɛ ɔreboa saa nkurɔfo no ma wɔate Bible no ase. Nhwɛso bi ni, bere bi a ɔreka asɛmpa no wɔ afie afie no, ɔkɔtoo Nepalni baa bi a ɔnim Yesu ho nsɛm kakra nanso Yehowa, nokware Nyankopɔn no deɛ, na ɔnnim ne ho hwee. Cheri de Bible no boaa no ma ɔhuu sɛ Yesu bɔɔ n’Agya a ɔwɔ soro no mpae. Bere a ɔbaa no huu sɛ ɔbɛtumi abɔ nokware Nyankopɔn a ne din de Yehowa no mpae no, ɔbuee ne komam gyee asɛmpa no. Ankyɛ koraa na ne kunu ne ne babaa nso firii ase suaa Bible no.—Dwom 83:18; Luka 22:41, 42.
Sɛnea Cheri te nnɛ
Bere a mehuu sɛ bere pii a Cheri de reka asɛmpa no ama n’ani agye no, mebisaa me ho sɛ, ‘Nea ɔreyɛ no, dɛn na ɛsi me kwan a mentumi nyɛ bi?’ Saa bere no na me nso masan aba Hong Kong. Metotoo me nneɛma yie sɛnea ɛbɛyɛ a mede bere pii bɛka asɛmpa no. Mahu sɛ sɛ meyɛ aso tie nkurɔfo na meboa wɔn ma wɔte Onyankopɔn Asɛm no ase a ɛma m’ani gye ankasa.
Mahu sɛ sɛ meyɛ aso tie nkurɔfo na meboa wɔn ma wɔte Onyankopɔn Asɛm no ase a ɛma m’ani gye ankasa
Ɛho nhwɛso ne sɛ, matumi ne Vietnamni baa bi a na ɔnni anigye ma enti daa na ɔte nisuo no asua Bible. Seesei ɔwɔ anigye, na n’ani gye sɛ ɔne asafo no bɔ.
Me ne Cheri nyinaa anya biribi a ɛsen anuonyam. Ɛwom, na yɛn ani gye sini a yɛyɛ no ho na ɛma yɛgyee din deɛ, nanso Yehowa Nyankopɔn ho ade a yɛrekyerɛkyerɛ no ama yɛanya akomatɔyam efisɛ ɛhyɛ ne din anuonyam. Afei mabɛhu sɛ Yesu asɛm yi yɛ nokware: “Ɔma mu wɔ anigyeɛ pii sene ɔgyeɛ.”—Asomafoɔ Nnwuma 20:35.